Izindatshana zika-Andrew K Kirk mayelana Martech Zone |
Imibhalo nge Andrew K Kirk
U-Andrew K Kirk unguMsunguli weFace The Buzz, esiza osomabhizinisi abancane ukuthi basebenzise amandla okukhangisa online. Amakhasimende akhe amanje aqoqe imali engaphezulu kuka- $ 3.5 million. Uhlinzeka ngenombolo elinganiselwe yokuhlolwa kwamahhala kwe-inthanethi.
NgoLwesine, Agasti 2, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Andrew K Kirk
I-Psychology of Social Networking iyi-infographic esabekayo silethelwa yona yiqembu ku-sychologydegree.net. Kufakiwe izibalo zakho ezijwayelekile ngokusetshenziswa kwemithombo yezokuxhumana nokwanda kwayo ezimpilweni zethu. Kepha imininingwane ethokozisayo ingatholakala engxenyeni engezansi yesithombe, lapho iqembu lifinyelela enhliziyweni yokuthi kungani sisebenzisa amanethiwekhi omphakathi. Futhi qagela ukuthi batholani? Kuvela iningi lethu, lokho kungokomzwelo wethu
Kungani Izici Zokusesha Nokutholwa kwe-Twitter KUNGAKHO UKUSHINTSHA Igeyimu
NgeSonto, ngoJulayi 8, i-2012 NgoLwesine, Juni 18, 2015 Andrew K Kirk
I-Twitter imemezele isethi yezici ezintsha ezithuthukisa zombili izici zokusesha nezokutholwa. Manje usungasesha futhi uzoboniswa amaTweets, ama-athikili, ama-akhawunti, izithombe namavidiyo afanelekile. Lezi izinguquko: Ukulungiswa kwesipelingi: Uma ungapeli kahle igama, i-Twitter izobonisa ngokuzenzakalela imiphumela yombuzo wakho ohlosiwe. Iziphakamiso ezihambisanayo: Uma usesha isihloko abantu abasisebenzisela imigomo eminingi, i-Twitter izonikeza iziphakamiso ezifanele zamagama afanayo. Imiphumela enamagama angempela
Kungani Ibhizinisi Lakho Kumele Lihambe Komphakathi
NgoLwesibili, ngoJulayi 3, i-2012 NgoLwesine, Juni 18, 2015 Andrew K Kirk
Ngokungafani nezinye izinhlobo zendabuko zokumaketha, ukumaketha ezinkundleni zokuxhumana kutholakala kubaninimabhizinisi abancane njengoba kwenzeka ezinkampanini zeFortune 500. Le infographic ikhombisa umthelela wezokuxhumana kwezenhlalo ebhizinisini lakho.